I-Private BEACH HOUSE w/POOL, i-Real Quezon - i-RedBeach - I-Airbnb
I-Private BEACH HOUSE w/POOL, i-Real Quezon - i-RedBeach
Infanta, Calabarzon, i-Philippines
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Victoria
Ungayithanda le ndawo yokungcebeleka yangasese wena nabathandekayo bakho! Cabanga ngokuheleza umoya wolwandle, isihlabathi kanye nelanga kukodwa.
Indawo engasebhishi yangasese, ichibi, ishawa yangaphandle nendlu yangasese...khululeka kungaba ngasosebeni noma emphemeni. Sibheke kakhulu ubumfihlo nokuhlanzeka ngakho-ke zizwe uphephile ngaphakathi kwenkomponi!
Ukuziphekela, kodwa sinabasebenzi besevisi abangu-2 abangakusiza. Ukudla kwasolwandle okusha, izithelo nemifino etholakala emakethe emanzi eseduze.
Indawo ephelele yokuphumula nokuzindla kude nedolobha elimatasa.
Konke kuhlanzekile, kuphephile futhi kuhlanzekile. Ngaphandle kwamandla elanga okubulala amagciwane, izindawo zethu ezinkulu ezivulekile, nezimiso zokuwasha/ukomisa... indawo yethu iphinde isebenzisa ama-ozonator omoya kanye namalambu okuhlunga e-UltraViolet.
Sinamagumbi amabili okulala ngaphakathi endlini enkulu ngalinye linombhede olingana nendlovukazi. Kunezinketho zokumisa amatende (amatende anikeziwe), noma usebenzise omatilasi abagoqayo abawugqinsi (nabo buhlinzekiwe).
Kuzimele ngaphandle i-infinity i-lap pool
4.93 · 122 okushiwo abanye
Njengoba indawo yethu ingasogwini lolwandle, lindela ezinye izindawo zokungcebeleka zomphakathi eziseduze. Indawo yakho izoba ngeyakho kuphela :-)
Ngingathanda ukukuguqulela ukhiye ngokwami ngakho-ke ngicela ungitshele kusenesikhathi :-)
Hlola ezinye izinketho ezise- Infanta namaphethelo